ကမ္ဘာ့ရှေးအကျဆုံး ပိရမစ် ၈ ခု အကြောင်း - Thutazone
ကမ္ဘာ့ရှေးအကျဆုံး ပိရမစ် ၈ ခု အကြောင်း
By ThutammPosted on August 2, 2018
ရှေးခေတ်အီဂျစ်လို့ ဆိုလိုက်တာနဲ့ အရင်ဆုံးမြင်မိကြမှာ ပိရမစ်တွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ပိရမစ်တွေဟာ ရှေးခေတ်အီဂျစ်ယဉ်ကျေးမှုကိုဖော်ပြနေတဲ့ အနီးစပ်ဆုံး အဆောက်အအုံတွေဖြစ်ပါတယ်။ အီဂျစ်ဖာရိုဘုရင်တွေ သေဆုံးတဲ့အခါ ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ အဆောက်အအုံကြီးတွေမှာ မြုပ်နှံပေးဖို့အတွက် ပိရမစ်တွေကို တည်ဆောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အီဂျစ်ပိရမစ်တွေမှာ ကျွန်တော်တို့ အများဆုံးသိကြတာက ဂိုင်ဇာပိရမစ်ပဲ ဖြစ်ပြီး ကျန်ပိရမစ်တွေအကြောင်းကိုတော့ မသိကြပါဘူး။ တကယ်တော့ ဂိုင်ဇာပိရမစ်ထက်ရှေးကျတဲ့ ပိရမစ်တွေရှိပါသေးတယ်။ ဂိုင်ဇာပိရမစ်အပါအ၀င် ရှေးကျတဲ့ ပိရမစ်တွေကတော့….
Pyramid of Menkaure ဟာ ဂိုင်ဇာပိရမစ်စုမှာ ရှိတဲ့ပိရမစ် (၃)ခုထဲက အငယ်ဆုံးပိရမစ်ဖြစ်ပါတယ်။ Pyramid of Menkaure ကို ဘီစီ၂၄၉၀ ကဆောက်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး အီဂျစ်တွေရဲ့အရေးပါဆုံးသော အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အအုံတွေထဲက တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ ပိရမစ်ဟာ စတုတ္ထမြောက်ဖာရိုးမင်းဆက်ရဲ့ (၅) ယောက်မြောက် ဖာရိုဘုရင် Menkaure ရဲ့ သချိုင်းနေရာဖြစ်ပါတယ်။ Menkaure ပိရမစ် ဟာ အခြား ထင်ရှားတဲ့ ပိရမစ်နှစ်ခုကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Khafre ပိရမစ်ရဲ့ ဆယ်ပုံတစ်ပုံအရွယ်အစားသာရှိပါတယ်။
ဒီပိရမစ်ကိုတော့ Menkaure သေဆုံးပြီးတဲ့ အချိန်မှသာ စတင်ဆောက်လုပ်ခဲ့ပြီး သူနောက်ဆက်ခံခဲ့တဲ့ အဲဒီမင်းဆက်ရဲ့ နောက်ဆုံးဖာရိုးဘုရင် Shepseskaf လက်ထက်မှသာ အပြီးသတ်ခဲ့ရပါတယ်။ Menkaure ပိရမစ် ရဲ့သတိထားမိစရာအကောင်းဆုံး အမှတ်အသားကတော့ ပိရမစ်ရဲ့မြောက်ဘက်မျက်နှာမှာတွေ့ရတဲ့င်္ကြိးမားတဲ့ ဟတ်တက်ကွဲအပေါက်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ တူရကီနိုင်ငံက ဒုတိယမြောက် Ayyubid Sultan မင်းဆက်ကဘုရင် Malek al-Aziz ရဲ့ လက်ချက်ဖြစ်ပြီး ၁၂ရာစုလောက်တုန်းက Giza မှာရှိတဲ့ ပိရမစ်တွေကို ဖောက်ထွင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့ရာမှ Pyramid of Menkaure ကနေစတင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Khafre ပိရမစ်ဟာလည်း အီဂျစ်နိုင်ငံရဲ့ လူသိများထင်ရှားတဲ့ ဂိုင်ဇာပိရမစ်စု ၃ခုထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အီဂျစ်ပြည်ရဲ့ ဒုတိယမြောတ်အကြီးဆုံးပိရမစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး လေးဆက်မြောက် ဖာရိုဘုရင်Khafre ရဲ့ သချိုင်းနေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Khafre ဟာ သူမသေဆုံးခင်ကတည်းက ဒီအဆောက်အအုံကိုတည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပိရမစ်ရဲ့အောက်ခြေအလျားက (၇၀၆)ပေရှိပြီးတဖြည်းဖြည်းအမြင့်ကို တက်လာကာ(၄၄၈)ပေအထိ အမြင့်ရှိပါတယ်။ ဒီပိရမစ်ကိုတစ်ခုကို အလေးချိန်(၂)တန်လောက်ရှိတဲ့ထုံးကျောက်တွေနဲ့ တည်ဆောက်ထားတာပါ။
ဒါအပြင်ကျောက်တုံးတွေနဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့ Foundation ဟာ (၃၃)ပေအထိရှိတာမို့ အကြီးဆုံးပိရမစ်ဖြစ်တဲ့ Khufuရဲ့ ပိရမစ်ထက်တောင်ပိုမြင့်နေပါသေးတယ်။ Khafre ပိရမစ်ဟာ Khufu ရဲ့ ပိရမစ်ထက်ပိုမိုရူပ်ထွေးပြီး အသေးစိတ်ခြယ်သထားတာပါ။ Khafre ပိရမစ် အထင်ရှားဆုံးလက်ရာတစ်ခုအဖြစ် အလွန်ကြီးမားတဲ့ စဖင့်ရုပ်ထုကို တွေ့ရမှာပါ။ အဲဒီရုပ်တုကြောင့် ပိရမစ်ရဲ့မြင်ကွင်းဟာ အလွန်ရှုပ်ထွေးနေပေမဲ့ ဖာရိုးဘုရင် Khafre ဟာ အဲဒီစဖင့်ရုပ်တုကို သူနန်းတော်နဲ့ တူအောင် သူရဲ့ဂူဗိမာန်မှာ တည်ဆောက်စေခဲ့တာလို့ သမိုင်းပညာ ရှင်တွေက ယုံကြည်ကြပါတယ်။ အဲဒီပိရမစ်ကို ဘီစီ ၂၅၂၀ ကဆောက်လုပ်ခဲ့တာပါ။
ဂိုင်ဇာ မဟာပိရမစ်ကြီးဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကျော်ကြားဆုံးသောပိရမစ်ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့အံ့ဖွယ် ရှေးဟောင်းလက်ရာ (၇)ပါးမှာလည်း တစ်ခုအပါအဝင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီပိရမစ် ကိုတော့ ဘီစီ၂၅၈၀-၂၅၆၀ အကြားမှာ ဖာရိုးဘုရင် Khufu က တည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူသားတွေဖန်တီးထားတဲ့ အမြင့်ဆုံး အဆောက်အအုံအဖြစ် နှစ်ပေါင်း (၃၈၀၀)လောက်ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၈၈၉ ခုနှစ် ပြင်သစ်နိုင်ငံက အီဖယ် မျှော်စင်ပေါ်ပေါက်လာမှသာ ပထမနေရာကနေဆင်းပေးခဲ့ရတာပါ။ ဂိုင်ဇာ မဟာပိရမစ်ကြီးကို သုသေသနပညာရှင်တွေက ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လေ့လာခဲ့ကြပေမဲ့ ဒီအထိမ်းအမှတ်အဆောက်အအုံကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့တည်ဆောက်ခဲ့တာကတော့ ယနေ့တိုင်ဆန်းပြားတဲ့ မေးခွန်းအဖြစ် ရှိနေပါသေးတယ်။
အများစုလက်ခံထားကြသော တည်ဆောက်မှုနှင့်ပတ်သက်သည့် သီအိုရီကတော့ ကြီးမားသော ကျောက်တုံးများကို ကျောက်ထုတ်ရာဒေသမှ ဆွဲယူလာပြီး နေရာတကျမတင် တည်ဆောက်ခဲ့သည် ဟူ၍ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာလည်းမှန်းဆချက်သက်သက်သာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမဟာပိရမစ်ကြီးကို နှစ်ပေါင်း ၂၀ကျော်ကြာ ဆောက်လုပ်ခဲ့ရပြီး ကျောက်တုံးပေါင်း ၂.၃သန်းခန့်ပါဝင်ကာ ထိုအထဲတွင် အလွန်ကြီးမားပြီး တန် ၅၀ကျော် အလေးချိန်ရှိသော ဧရာမကျောက်တုံးအချို့လည်းပါဝင်နေပါသေးတယ်။ ပိရမစ်ထဲမှာတော့ ဘုရင်ခန်းမဆောင် နဲ့ မိဖုရားခန်းမဆောင် အပါအ၀င် ခန်းမဆောင် ၃ခုရှိပါတယ်။
Red ပိရမစ်ကို ပိရမစ်အစုအဝေးရဲ့ မြောက်ဘက်အကျဆုံးမှာရှိတာကြောင့် မြောက်ဖျားပိရမစ်လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်။ ဖာရိုဘုရင် Sneferu ရဲ့ သချိုင်းတည်ရှိရာ အီဂျစ်ပြည်ရဲ့ တတိယမြောက် အကြီးဆုံး ပိရမစ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ ပိရမစ်ကို ၂၆၀၀ BCခန့်ကဆောက်လုပ်ခဲ့တာပါ။ ဖာရိုးဘုရင် Sneferu ဟာဒီပိရမစ်ကို မတည်ဆောက်ခင်က Medium နဲ့ The Bent ပိရမစ်နှစ်ခုကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပေမယ့်သူ့စိတ်တိုင်းကျမဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ တတိယမြောက်တည်ဆောက်တဲ့ Red Pyramid မှသာ သူ့စိတ်တိုင်းကျဖြစ်အောင်တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့တာပါ။
အဲဒီပိရမစ်ကို Red Pyramid လို့နာမည်ပေးထားပေမဲ့ အဖြူရောင်ထုံးကျောက်တွေနဲ့ပဲ တည်ဆောက်ထားခဲ့တာပါ။ အလယ်ခေတ်တုန်းက ကိုင်ရိုမြို့အဆောက်အဦးတွေ တည်ဆောက်ဖို့အတွက် ဒီပိရမစ်ရဲ့ အပေါ်ယံထုံးကျောက်တွေကို ယူဆောင်ခြင်းခံခဲ့ရတာပါ။ အနည်းငယ်သော အဖြူရောင်ထုံးကျောက်တွေတွေ့ရတဲ့ အမှတ်အသားတွေအရ Red Pyramidကိုတည်ဆောက်ခဲ့သူဟာ ဘုရင် Sneferu ဖြစ်တယ်လို့မှတ်ယူနိုင်တာပါ။ ယနေ့အခါမှာတော့ Red Pyramidကို အီဂျစ်အစိုးရက တရားဝင်ဖွင့်လှစ်ပေးထားပြီးတစ်နှစ်ပတ်လုံး လာရောက်လည်ပတ်သူတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေပါတယ်။
Bent ပိရမစ်ဟာ ဖာရိုးဘုရင် Sneferu ဆောက်လုပ်တဲ့ ဒုတိယမြောက် ပိရမစ်ဖြစ်ပြီး အဆောက်အအုံရဲ့ အနားတွေကိုချောမွတ်အောင်အနားသတ်ထားတဲ့ အီဂျစ်တွေရဲ့ ပထမဆုံးသော ကြိုးစားထားတဲ့ ပိရမစ်တွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သမိုင်းသုသေသနပညာရှင်တွေကတော့ Bent ပိရမစ်ကိုစတင်ဆောက်လုပ်ခဲ့ချိန်တည်းက ပိရမစ်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ ထောင့်အနားတွေဟာ မတည်ငြိမ်ပဲ အနည်းငယ် ရွေ့လျားနေခဲ့ပြီး ဒီထောင့်တွေရဲ့ မညီမညာပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့် အဲဒီပိရမစ်ဟာ ကွေး နေတဲ့ပုံပေါက်နေပါတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။
ဒါအပြင် ဒီပိရမစ်ရဲ့ အခြားဝိသေသ တစ်ခုကတော့ ဒီအဆောက်အအုံရဲ့အပြင်ဘက်မှာ ကာထားတဲ့ ထုံးကျောက်တွေဟာ ယနေ့တိုင်မူလအတိုင်းရှိနေသေးတဲ့အချက်ပါ။ ဒီပိရမစ်မှာ ဝင်ပေါက်နှစ်ခုရှိပြီး Bent Pyramid ရဲ့မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ ပထမဝင်ပေါက်မှာတော့ လာရောက်လည်ပတ်တဲ့ ခရီးသည်တွေအဆင်ပြေစေရန် သစ်သားစောင်းတန်းအများအပြားထားရှိပေးထားပါတယ်။ ဒုတိယဝင်ပေါက်ကတော့ပိရမစ်ရဲ့ မြင့်မားတဲ့အပိုင်းဖြစ်တဲ့ အနောက်ဘက်ကနေ ဝင်ရောက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ Bent Pyramid ရဲ့ အတွင်းပိုင်းနေရာတွေကိုတော့ အန္တရာယ်ရှိတဲ့အတွက် ဝင်ရောက်လေ့လာခွင့်မပြုပါဘူး။ အဲဒီ ပိရမစ်ကိုတော့ ၂၆၀၀ ဘီစီခန့်ကတည်ဆောက်ထားခဲ့တာပါ။
အီဂျစ်နိုင်ငံ၊ ကိုင်ရိုမြို့တော် တောင်ပိုင်း(၆၂)မိုင်ခန့်အကွာမှာတည်ရှိတဲ့ Medium ပိရမစ် ကို ပြိုကျတဲ့ပိရမစ် လို့လူသိများပါတယ်။ အခြားပိရမစ်တွေနဲ့ ပုံစံကွဲထွက်နေတဲ့ ဒီ Medium ပိရမစ်ကို တတိယမြောက် အီဂျစ်မင်းဆက်ရဲ့ ဖာရိုဘုရင် Djoser ကွယ်လွန်ပြီးတဲ့နောက်မှာ ဆောက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Medium ပိရမစ်လို့အမည်ပေးခဲ့ရတာကတော့ အဲဒီအဆောက်အအုံကိုတည်ဆောက်ရာမှာ တစ်ကြိမ်တည်းအပြီးမတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပဲ တဖြည်းဖြည်းချင်း ဖာရိုမင်းအဆက်ဆက်ကတည်ဆောက်ခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်။
Medium ပိရမစ်ကိုစတင်ဆောက်လုပ်ခဲ့သူကတော့ တတိယမြောက် အီဂျစ်မင်းဆက်ရဲ့ နောက်ဆုံးဖာရိုးဘုရင် Huni ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူ့လက်ထက်မှာမပြီးခဲ့တာကြောင့် စတုတ္ထမြောက်အီဂျစ်မင်းဆက်ရဲ့ ပထမဆုံးဘုရင် Sneferu ကပြီးဆုံးအောင် ဆက်လက်တည်ဆောက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့စိတ်တိုင်းကျ မဖြစ်ခဲ့တာကြောင့် Sneferu ဟာ နောက်ထပ်ပိရမစ်တွေကို ထပ်ပြီးတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီပိရမစ်ကိုတော့ ဘီစီ ၂၆၀၀ခန့် က တည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပိရမစ်ကတော့ အီဂျစ်နိုင်ငံကမဟုတ်ပါဘူး။ တောင်အမေရိကတိုက်ရဲ့ ပိရမစ်မြို့တော်အဖြစ်ထင်ရှားတဲ့ Caral ဒေသဟာ ပီရူးနိုင်ငံမြို့တော်လီမာ မြောက်ဘက် (၁၂၀)မိုင်အကွာမှာတည်ရှိပါတယ်။ တောင်အမေရိကတိုက်ရဲ့ ရှေးအကျဆုံးသော ယဉ်ကျေးမှုမြို့တော်ဖြစ်တဲ့အပြင် Norte Chico လူမျိုးစုတွေနေထိုင်ခဲ့တဲ့မြို့တော်နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Caral Pyramids တွေဟာ အီဂျစ် ပိရမစ်တွေနဲ့တစ်ချိန်တည်းနီးပါးပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာဟာရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်များစွာရှိတဲ့အပြင် ရှေးဟောင်းလယ်ယာစိုက်ပိ်ျုးရေးဆိုင်ရာကိရိယာတွေ၊ ဘုရားကျောင်းများ၊ ရှေးခေတ်အားကစားကွင်း၊ ရေအောက်ကိုနစ်မြုပ်နေတဲ့ဈေးဆိုင်တွေ၊ လူနေအိမ်နဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာခွဲခြားထားတဲ့ဧရိယာတွေ၊ ကြီးမားတဲ့ပိရမစ် ပုံစံအဆောက်အအုံ (၆)ခုတို့လည်း ရှိနေပါတယ်။
Caral ပိရမစ်ကိုတော့၁၉၄၈ခုနှစ်မှာ စတင်တွေ့ရှိခဲ့ပေမဲ့ အစပိုင်းမှာတော့စိတ်ဝင်စားစရာအနေအထားမရှိခဲ့ပါဘူး။ ၁၉၇၀ခုနှစ် ရောက်မှသာ သမိုင်းသုသေသနပညာရှင်တွေက ဒီဒေသအကြောင်းကိုအသေအချာနားလည်လာခဲ့ပြီး ဒီနေရာဟာ ပိရမစ်တွေရဲ့ အစပြုတဲ့ နေရာအဖြစ်တောင်သတ်မှတ်ခဲ့ကြတာပါ။ အဲအချိန်ကစပြီး ဒီနေရာမှာကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်တူးဖော်တွေ့ရှိမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာပါ။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာတော့ ဒီဒေသကိုUNESCOအဖွဲ့က ကမ္ဘာအမွေအနှစ်ဆိုင်ရာ ထိမ်းသိန်းစောင့်ရှောက်ရေးနယ်မြေ အဖြစ်သတ်မှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ Caral Pyramids တွေကိုတော့ ဘီစီ ၂၆၂၇ မှာ စတင်တည်ဆောက်ခဲ့တယ်လို့ မှတ်တမ်းတွေကဖော်ပြကြပါတယ်။
Pyramid of Djoser ကို ဘီစီ ၂၆၆၇-၂၆၄၈ အကြားတည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး အီဂျစ်နိုင်ငံ၊ Saqqara Necropolis ဒေသမှာ တည်ရှိကာ (၂၀၃)ပေအမြင့်ရှိပါတယ်။ Pyramid of Djoser ကိုတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အချိန်ဟာ မကြာသေးပေမဲ့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ သက်တမ်းအရင့်ဆုံး ပိရမစ်အဖြစ်သမိုင်းပညာရှင်တွေက အခိုင်အမာပြောဆိုကြပါတယ်။ Pyramid of Djoser ကို တတိယမြောက် အီဂျစ်ဖာရိုမင်းဆက်ရဲ့ ပထမဆုံးဘုရင် Djoser ရဲ့ ဂူဗိမာန်အတွက်ရည်ရွယ်ပြီး ဆောက်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး Djoserရဲ့လက်စွဲတော် ဗိသုကာပညာရှင် အမ်ဟိုတက်(Imohtep) က ဦးဆောင်ဆောက်လုပ်ခဲ့တာပါ။
Imohtep ဟာ သူရဲ့အရှင်သခင်အတွက်အခမ်းနားဆုံးသော သချိုင်းဂူကိုတည်ဆောက်ပေးရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး တည်ဆောက်ပြီးသား mastabs တွေပေါ်မှာ အမိုးပြားသဏ္ဍန်အနားတွေကိုဘောင်ခတ်ထားတဲ့အုတ်ချပ်တွေကို တစ်ခုရဲ့ထိပ်မှာတစ်ခု ထိုးပေးကာ ပထမဆုံးသော ပိရမစ်တွေရဲ့အဆင့်အဖြစ် ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ ဒီပိရမစ်ဟာ အလွန်ကြီးမားတဲ့ ဘုရင်Djoser သချိုင်းကြီးရဲ့အလယ်မှာတည်ရှိပြီး ဒီသချိုင်းထဲမှာ လျို့ဝှက်တည်ဆောက်ထားတဲ့ ထုံးကျောက်နံရံတွေ၊ ဘုရားကျောင်းတစ်ခု၊ Djoser ဘုရင် ရဲ့ရုပ်တု လည်းပါဝင်အောင်တည်ဆောက်ထားပါတယ်။
ကမ်ဘာ့ရှေးအကဆြုံး ပိရမဈ ၈ ခု အကွောငျး (unicode)
ရှေးခတျေအီဂဈြလို့ ဆိုလိုကျတာနဲ့ အရငျဆုံးမွငျမိကွမှာ ပိရမဈတှဖွေဈပါလိမျ့မယျ။ ပိရမဈတှဟော ရှေးခတျေအီဂဈြယဉျကြေးမှုကိုဖျောပွနတေဲ့ အနီးစပျဆုံး အဆောကျအအုံတှဖွေဈပါတယျ။ အီဂဈြဖာရိုဘုရငျတှေ သဆေုံးတဲ့အခါ ကွီးကယျြခမျးနားတဲ့ အဆောကျအအုံကွီးတှမှော မွုပျနှံပေးဖို့အတှကျ ပိရမဈတှကေို တညျဆောကျကွတာဖွဈပါတယျ။ အီဂဈြပိရမဈတှမှော ကြှနျတျောတို့ အမြားဆုံးသိကွတာက ဂိုငျဇာပိရမဈပဲ ဖွဈပွီး ကနျြပိရမဈတှအေကွောငျးကိုတော့ မသိကွပါဘူး။ တကယျတော့ ဂိုငျဇာပိရမဈထကျရှေးကတြဲ့ ပိရမဈတှရှေိပါသေးတယျ။ ဂိုငျဇာပိရမဈအပါအဝငျ ရှေးကတြဲ့ ပိရမဈတှကေတော့….
Pyramid of Menkaure ဟာ ဂိုငျဇာပိရမဈစုမှာ ရှိတဲ့ပိရမဈ (၃)ခုထဲက အငယျဆုံးပိရမဈဖွဈပါတယျ။ Pyramid of Menkaure ကို ဘီစီ၂၄၉၀ ကဆောကျလုပျခဲ့တာဖွဈပွီး အီဂဈြတှရေဲ့အရေးပါဆုံးသော အထိမျးအမှတျအဆောကျအအုံတှထေဲက တဈခု ဖွဈပါတယျ။ ဒီ ပိရမဈဟာ စတုတ်ထမွောကျဖာရိုးမငျးဆကျရဲ့ (၅) ယောကျမွောကျ ဖာရိုဘုရငျ Menkaure ရဲ့ သခြိုငျးနရောဖွဈပါတယျ။ Menkaure ပိရမဈ ဟာ အခွား ထငျရှားတဲ့ ပိရမဈနှဈခုကတဈခုဖွဈတဲ့ Khafre ပိရမဈရဲ့ ဆယျပုံတဈပုံအရှယျအစားသာရှိပါတယျ။ ဒီပိရမဈကိုတော့ Menkaure သဆေုံးပွီးတဲ့ အခြိနျမှသာ စတငျဆောကျလုပျခဲ့ပွီး သူနောကျဆကျခံခဲ့တဲ့ အဲဒီမငျးဆကျရဲ့ နောကျဆုံးဖာရိုးဘုရငျ Shepseskaf လကျထကျမှသာ အပွီးသတျခဲ့ရပါတယျ။ Menkaure ပိရမဈ ရဲ့သတိထားမိစရာအကောငျးဆုံး အမှတျအသားကတော့ ပိရမဈရဲ့မွောကျဘကျမကျြနှာမှာတှရေ့တဲ့င်ျကွိးမားတဲ့ ဟတျတကျကှဲအပေါကျကွီးဖွဈပါတယျ။ ဒါဟာ တူရကီနိုငျငံက ဒုတိယမွောကျ Ayyubid Sultan မငျးဆကျကဘုရငျ Malek al-Aziz ရဲ့ လကျခကျြဖွဈပွီး ၁၂ရာစုလောကျတုနျးက Giza မှာရှိတဲ့ ပိရမဈတှကေို ဖောကျထှငျးဖို့ကွိုးစားခဲ့ရာမှ Pyramid of Menkaure ကနစေတငျခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။
Khafre ပိရမဈဟာလညျး အီဂဈြနိုငျငံရဲ့ လူသိမြားထငျရှားတဲ့ ဂိုငျဇာပိရမဈစု ၃ခုထဲက တဈခုဖွဈပါတယျ။ အီဂဈြပွညျရဲ့ ဒုတိယမွောတျအကွီးဆုံးပိရမဈတဈခုဖွဈပွီး လေးဆကျမွောကျ ဖာရိုဘုရငျKhafre ရဲ့ သခြိုငျးနရောလညျးဖွဈပါတယျ။ Khafre ဟာ သူမသဆေုံးခငျကတညျးက ဒီအဆောကျအအုံကိုတညျဆောကျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ဒီပိရမဈရဲ့အောကျခွအေလြားက (၇၀၆)ပရှေိပွီးတဖွညျးဖွညျးအမွငျ့ကို တကျလာကာ(၄၄၈)ပအေထိ အမွငျ့ရှိပါတယျ။ ဒီပိရမဈကိုတဈခုကို အလေးခြိနျ(၂)တနျလောကျရှိတဲ့ထုံးကြောကျတှနေဲ့ တညျဆောကျထားတာပါ။ ဒါအပွငျကြောကျတုံးတှနေဲ့တညျဆောကျထားတဲ့ Foundation ဟာ (၃၃)ပအေထိရှိတာမို့ အကွီးဆုံးပိရမဈဖွဈတဲ့ Khufuရဲ့ ပိရမဈထကျတောငျပိုမွငျ့နပေါသေးတယျ။ Khafre ပိရမဈဟာ Khufu ရဲ့ ပိရမဈထကျပိုမိုရူပျထှေးပွီး အသေးစိတျခွယျသထားတာပါ။ Khafre ပိရမဈ အထငျရှားဆုံးလကျရာတဈခုအဖွဈ အလှနျကွီးမားတဲ့ စဖငျ့ရုပျထုကို တှရေ့မှာပါ။ အဲဒီရုပျတုကွောငျ့ ပိရမဈရဲ့မွငျကှငျးဟာ အလှနျရှုပျထှေးနပေမေဲ့ ဖာရိုးဘုရငျ Khafre ဟာ အဲဒီစဖငျ့ရုပျတုကို သူနနျးတျောနဲ့ တူအောငျ သူရဲ့ဂူဗိမာနျမှာ တညျဆောကျစခေဲ့တာလို့ သမိုငျးပညာ ရှငျတှကေ ယုံကွညျကွပါတယျ။ အဲဒီပိရမဈကို ဘီစီ ၂၅၂၀ ကဆောကျလုပျခဲ့တာပါ။
ဂိုငျဇာ မဟာပိရမဈကွီးဟာ ကမ်ဘာပျေါမှာ အကြျောကွားဆုံးသောပိရမဈဖွဈပွီး ကမ်ဘာ့အံ့ဖှယျ ရှေးဟောငျးလကျရာ (၇)ပါးမှာလညျး တဈခုအပါအဝငျလညျးဖွဈပါတယျ။ အဲဒီပိရမဈ ကိုတော့ ဘီစီ၂၅၈၀-၂၅၆၀ အကွားမှာ ဖာရိုးဘုရငျ Khufu က တညျဆောကျခဲ့တာဖွဈပွီး ကမ်ဘာပျေါမှာ လူသားတှဖေနျတီးထားတဲ့ အမွငျ့ဆုံး အဆောကျအအုံအဖွဈ နှဈပေါငျး (၃၈၀၀)လောကျရပျတညျနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ၁၈၈၉ ခုနှဈ ပွငျသဈနိုငျငံက အီဖယျ မြှျောစငျပျေါပေါကျလာမှသာ ပထမနရောကနဆေငျးပေးခဲ့ရတာပါ။ ဂိုငျဇာ မဟာပိရမဈကွီးကို သုသသေနပညာရှငျတှကေ ကယျြကယျြပွနျ့ပွနျ့လလေ့ာခဲ့ကွပမေဲ့ ဒီအထိမျးအမှတျအဆောကျအအုံကို ဘယျလိုနညျးနဲ့တညျဆောကျခဲ့တာကတော့ ယနတေို့ငျဆနျးပွားတဲ့ မေးခှနျးအဖွဈ ရှိနပေါသေးတယျ။ အမြားစုလကျခံထားကွသော တညျဆောကျမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ သီအိုရီကတော့ ကွီးမားသော ကြောကျတုံးမြားကို ကြောကျထုတျရာဒသေမှ ဆှဲယူလာပွီး နရောတကမြတငျ တညျဆောကျခဲ့သညျ ဟူ၍ဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒါဟာလညျးမှနျးဆခကျြသကျသကျသာဖွဈပါတယျ။ ဒီမဟာပိရမဈကွီးကို နှဈပေါငျး ၂၀ကြျောကွာ ဆောကျလုပျခဲ့ရပွီး ကြောကျတုံးပေါငျး ၂.၃သနျးခနျ့ပါဝငျကာ ထိုအထဲတှငျ အလှနျကွီးမားပွီး တနျ ၅၀ကြျော အလေးခြိနျရှိသော ဧရာမကြောကျတုံးအခြို့လညျးပါဝငျနပေါသေးတယျ။ ပိရမဈထဲမှာတော့ ဘုရငျခနျးမဆောငျ နဲ့ မိဖုရားခနျးမဆောငျ အပါအဝငျ ခနျးမဆောငျ ၃ခုရှိပါတယျ။
Red ပိရမဈကို ပိရမဈအစုအဝေးရဲ့ မွောကျဘကျအကဆြုံးမှာရှိတာကွောငျ့ မွောကျဖြားပိရမဈလို့လညျးချေါကွပါတယျ။ ဖာရိုဘုရငျ Sneferu ရဲ့ သခြိုငျးတညျရှိရာ အီဂဈြပွညျရဲ့ တတိယမွောကျ အကွီးဆုံး ပိရမဈဖွဈပါတယျ။ အဲဒီ ပိရမဈကို ၂၆၀၀ BCခနျ့ကဆောကျလုပျခဲ့တာပါ။ ဖာရိုးဘုရငျ Sneferu ဟာဒီပိရမဈကို မတညျဆောကျခငျက Medium နဲ့ The Bent ပိရမဈနှဈခုကိုတညျဆောကျခဲ့ပမေယျ့သူ့စိတျတိုငျးကမြဖွဈခဲ့ပါဘူး။ တတိယမွောကျတညျဆောကျတဲ့ Red Pyramid မှသာ သူ့စိတျတိုငျးကဖြွဈအောငျတညျဆောကျနိုငျခဲ့တာပါ။ အဲဒီပိရမဈကို Red Pyramid လို့နာမညျပေးထားပမေဲ့ အဖွူရောငျထုံးကြောကျတှနေဲ့ပဲ တညျဆောကျထားခဲ့တာပါ။ အလယျခတျေတုနျးက ကိုငျရိုမွို့အဆောကျအဦးတှေ တညျဆောကျဖို့အတှကျ ဒီပိရမဈရဲ့ အပျေါယံထုံးကြောကျတှကေို ယူဆောငျခွငျးခံခဲ့ရတာပါ။ အနညျးငယျသော အဖွူရောငျထုံးကြောကျတှတှေရေ့တဲ့ အမှတျအသားတှအေရ Red Pyramidကိုတညျဆောကျခဲ့သူဟာ ဘုရငျ Sneferu ဖွဈတယျလို့မှတျယူနိုငျတာပါ။ ယနအေ့ခါမှာတော့ Red Pyramidကို အီဂဈြအစိုးရက တရားဝငျဖှငျ့လှဈပေးထားပွီးတဈနှဈပတျလုံး လာရောကျလညျပတျသူတှနေဲ့ ပွညျ့နှကျနပေါတယျ။
Bent ပိရမဈဟာ ဖာရိုးဘုရငျ Sneferu ဆောကျလုပျတဲ့ ဒုတိယမွောကျ ပိရမဈဖွဈပွီး အဆောကျအအုံရဲ့ အနားတှကေိုခြောမှတျအောငျအနားသတျထားတဲ့ အီဂဈြတှရေဲ့ ပထမဆုံးသော ကွိုးစားထားတဲ့ ပိရမဈတှလေညျးဖွဈပါတယျ။ သမိုငျးသုသသေနပညာရှငျတှကေတော့ Bent ပိရမဈကိုစတငျဆောကျလုပျခဲ့ခြိနျတညျးက ပိရမဈရဲ့ထိပျပိုငျးမှာရှိတဲ့ ထောငျ့အနားတှဟော မတညျငွိမျပဲ အနညျးငယျ ရှလြေ့ားနခေဲ့ပွီး ဒီထောငျ့တှရေဲ့ မညီမညာပွောငျးလဲမှုတှကွေောငျ့ အဲဒီပိရမဈဟာ ကှေး နတေဲ့ပုံပေါကျနပေါတယျလို့ဆိုကွပါတယျ။ ဒါအပွငျ ဒီပိရမဈရဲ့ အခွားဝိသသေ တဈခုကတော့ ဒီအဆောကျအအုံရဲ့အပွငျဘကျမှာ ကာထားတဲ့ ထုံးကြောကျတှဟော ယနတေို့ငျမူလအတိုငျးရှိနသေေးတဲ့အခကျြပါ။ ဒီပိရမဈမှာ ဝငျပေါကျနှဈခုရှိပွီး Bent Pyramid ရဲ့မွောကျဘကျမှာရှိတဲ့ ပထမဝငျပေါကျမှာတော့ လာရောကျလညျပတျတဲ့ ခရီးသညျတှအေဆငျပွစေရေနျ သဈသားစောငျးတနျးအမြားအပွားထားရှိပေးထားပါတယျ။ ဒုတိယဝငျပေါကျကတော့ပိရမဈရဲ့ မွငျ့မားတဲ့အပိုငျးဖွဈတဲ့ အနောကျဘကျကနေ ဝငျရောကျရတာဖွဈပါတယျ။ Bent Pyramid ရဲ့ အတှငျးပိုငျးနရောတှကေိုတော့ အန်တရာယျရှိတဲ့အတှကျ ဝငျရောကျလလေ့ာခှငျ့မပွုပါဘူး။ အဲဒီ ပိရမဈကိုတော့ ၂၆၀၀ ဘီစီခနျ့ကတညျဆောကျထားခဲ့တာပါ။
အီဂဈြနိုငျငံ၊ ကိုငျရိုမွို့တျော တောငျပိုငျး(၆၂)မိုငျခနျ့အကှာမှာတညျရှိတဲ့ Medium ပိရမဈ ကို ပွိုကတြဲ့ပိရမဈ လို့လူသိမြားပါတယျ။ အခွားပိရမဈတှနေဲ့ ပုံစံကှဲထှကျနတေဲ့ ဒီ Medium ပိရမဈကို တတိယမွောကျ အီဂဈြမငျးဆကျရဲ့ ဖာရိုဘုရငျ Djoser ကှယျလှနျပွီးတဲ့နောကျမှာ ဆောကျလုပျခဲ့ပါတယျ။ Medium ပိရမဈလို့အမညျပေးခဲ့ရတာကတော့ အဲဒီအဆောကျအအုံကိုတညျဆောကျရာမှာ တဈကွိမျတညျးအပွီးမတညျဆောကျနိုငျခဲ့ပဲ တဖွညျးဖွညျးခငျြး ဖာရိုမငျးအဆကျဆကျကတညျဆောကျခဲ့လို့ဖွဈပါတယျ။ Medium ပိရမဈကိုစတငျဆောကျလုပျခဲ့သူကတော့ တတိယမွောကျ အီဂဈြမငျးဆကျရဲ့ နောကျဆုံးဖာရိုးဘုရငျ Huni ပဲဖွဈပါတယျ။ သူ့လကျထကျမှာမပွီးခဲ့တာကွောငျ့ စတုတ်ထမွောကျအီဂဈြမငျးဆကျရဲ့ ပထမဆုံးဘုရငျ Sneferu ကပွီးဆုံးအောငျ ဆကျလကျတညျဆောကျပေးခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူ့စိတျတိုငျးကြ မဖွဈခဲ့တာကွောငျ့ Sneferu ဟာ နောကျထပျပိရမဈတှကေို ထပျပွီးတညျဆောကျခဲ့ပါတယျ။ ဒီပိရမဈကိုတော့ ဘီစီ ၂၆၀ဝခနျ့ က တညျဆောကျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ဒီပိရမဈကတော့ အီဂဈြနိုငျငံကမဟုတျပါဘူး။ တောငျအမရေိကတိုကျရဲ့ ပိရမဈမွို့တျောအဖွဈထငျရှားတဲ့ Caral ဒသေဟာ ပီရူးနိုငျငံမွို့တျောလီမာ မွောကျဘကျ (၁၂၀)မိုငျအကှာမှာတညျရှိပါတယျ။ တောငျအမရေိကတိုကျရဲ့ ရှေးအကဆြုံးသော ယဉျကြေးမှုမွို့တျောဖွဈတဲ့အပွငျ Norte Chico လူမြိုးစုတှနေထေိုငျခဲ့တဲ့မွို့တျောနရောလညျးဖွဈပါတယျ။ Caral Pyramids တှဟော အီဂဈြ ပိရမဈတှနေဲ့တဈခြိနျတညျးနီးပါးပျေါပေါကျလာခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ဒီနရောဟာရှေးဟောငျးအမှအေနှဈမြားစှာရှိတဲ့အပွငျ ရှေးဟောငျးလယျယာစိုကျပျြိုးရေးဆိုငျရာကိရိယာတှေ၊ ဘုရားကြောငျးမြား၊ ရှေးခတျေအားကစားကှငျး၊ ရအေောကျကိုနဈမွုပျနတေဲ့ဈေးဆိုငျတှေ၊ လူနအေိမျနဲ့စီးပှားရေးဆိုငျရာခှဲခွားထားတဲ့ဧရိယာတှေ၊ ကွီးမားတဲ့ပိရမဈ ပုံစံအဆောကျအအုံ (၆)ခုတို့လညျး ရှိနပေါတယျ။ Caral ပိရမဈကိုတော့၁ ၉၄၈ခုနှဈမှာ စတငျတှရှေိ့ခဲ့ပမေဲ့ အစပိုငျးမှာတော့စိတျဝငျစားစရာအနအေထားမရှိခဲ့ပါဘူး။ ၁၉၇ဝခုနှဈ ရောကျမှသာ သမိုငျးသုသသေနပညာရှငျတှကေ ဒီဒသေအကွောငျးကိုအသအေခြာနားလညျလာခဲ့ပွီး ဒီနရောဟာ ပိရမဈတှရေဲ့ အစပွုတဲ့ နရောအဖွဈတောငျသတျမှတျခဲ့ကွတာပါ။ အဲအခြိနျကစပွီး ဒီနရောမှာကယျြကယျြပွနျ့ပွနျ့တူးဖျောတှရှေိ့မှုတှေ ဖွဈပျေါလာခဲ့တာပါ။ ၂၀၀၉ ခုနှဈမှာတော့ ဒီဒသေကိုUNESCOအဖှဲ့က ကမ်ဘာအမှအေနှဈဆိုငျရာ ထိမျးသိနျးစောငျ့ရှောကျရေးနယျမွေ အဖွဈသတျမှတျပေးခဲ့ပါတယျ။ Caral Pyramids တှကေိုတော့ ဘီစီ ၂၆၂၇ မှာ စတငျတညျဆောကျခဲ့တယျလို့ မှတျတမျးတှကေဖျောပွကွပါတယျ။
Pyramid of Djoser ကို ဘီစီ ၂၆၆၇-၂၆၄၈ အကွားတညျဆောကျခဲ့တာဖွဈပွီး အီဂဈြနိုငျငံ၊ Saqqara Necropolis ဒသေမှာ တညျရှိကာ (၂၀၃)ပအေမွငျ့ရှိပါတယျ။ Pyramid of Djoser ကိုတှရှေိ့ခဲ့တဲ့အခြိနျဟာ မကွာသေးပမေဲ့ ကမ်ဘာပျေါမှာ သကျတမျးအရငျ့ဆုံး ပိရမဈအဖွဈသမိုငျးပညာရှငျတှကေ အခိုငျအမာပွောဆိုကွပါတယျ။ Pyramid of Djoser ကို တတိယမွောကျ အီဂဈြဖာရိုမငျးဆကျရဲ့ ပထမဆုံးဘုရငျ Djoser ရဲ့ ဂူဗိမာနျအတှကျရညျရှယျပွီး ဆောကျလုပျခဲ့တာဖွဈပွီး Djoserရဲ့လကျစှဲတျော ဗိသုကာပညာရှငျ အမျဟိုတကျ(Imohtep) က ဦးဆောငျဆောကျလုပျခဲ့တာပါ။ Imohtep ဟာ သူရဲ့အရှငျသခငျအတှကျအခမျးနားဆုံးသော သခြိုငျးဂူကိုတညျဆောကျပေးရနျဆုံးဖွတျခဲ့ပွီး တညျဆောကျပွီးသား mastabs တှပေျေါမှာ အမိုးပွားသဏ်ဍနျအနားတှကေိုဘောငျခတျထားတဲ့အုတျခပျြတှကေို တဈခုရဲ့ထိပျမှာတဈခု ထိုးပေးကာ ပထမဆုံးသော ပိရမဈတှရေဲ့အဆငျ့အဖွဈ ဖနျတီးခဲ့ပါတယျ။ ဒီပိရမဈဟာ အလှနျကွီးမားတဲ့ ဘုရငျDjoser သခြိုငျးကွီးရဲ့အလယျမှာတညျရှိပွီး ဒီသခြိုငျးထဲမှာ လြို့ဝှကျတညျဆောကျထားတဲ့ ထုံးကြောကျနံရံတှေ၊ ဘုရားကြောငျးတဈခု၊ Djoser ဘုရငျ ရဲ့ရုပျတု လညျးပါဝငျအောငျတညျဆောကျထားပါတယျ။
Posted in History, Knowledge, PlacesTagged history, kaung htet, knowledge, places
Previous post အက်ဆစ်မိုးအကြောင်း သိကောင်းစရာ
Next post ဆင် ၊ ပဒူကောင် ၊ ဟင်နရီဖို့ဒ် နှင့် နယူးယောက်တိုင်း(မ်)